कुन दिशामा धन राख्दा बढेर जान्छ ? कहाँ धन राख्दा नाश हुन्छ? (हेर्नुहोस्) – Jagaran Nepal
यहाँ घरको सम्पत्ति र तिजोरी राख्नु निकै शुभ हुने गर्दछ। यसबाट उपलब्ध सामग्रीमा वृद्धि हुने गर्दछ।
यहाँ धन-सम्पत्ति र आभूषण राखियो भने घरको मुखियालाई धन कमाउन निकै कठिनाई हुने गर्दछ।
पैसा अथवा आभूषण जुन दराजमा राखिन्छ त्यो दराजमा भवनको उत्तर दिशाको कोठामा दक्षिणको भित्तामा टासेर राख्नु पर्दछ। यस प्रकारले राख्नाले दराज उत्तर दिशा तर्फ खुल्नेछ। यस्तोमा राखिएको पैसा र आभूषणमा सधै वृद्धि हुने गर्दछ।
यस दिशामा धन, सुन, चादीँ र आभूषण राख्नाले नोक्सान त हुदैन तर बढ़ोत्तरी पनि हुदैन।
भर्याङको मुनि दराज राख्नु शुभ मानिन्न। भर्याङको अथवा शौचालयको अगाडि दराज राख्न हुदैन। दराज भएको कोठामा फोहोर,माकुराको जालो हुनाले नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुने गर्दछ। घरको दराजमा लक्ष्मीजीको तस्वीर जसमा दुवै हात्ती सूंड उठाएका देख्न सकिन्छ। यस्तो तस्वीर लगाउनु निकै शुभ मानिने गरिन्छ। धन राख्ने दराज राख्ने कोठाको रङ क्रीम अथवा सेतो हुनु पर्छ।